नबिल बैंकको नाफा १ अर्ब ११ करोड बढी, कस्तो छ वित्तीय अवस्था ? (विवरणसहित) - सिधा मिडिया
नबिल बैंकको नाफा १ अर्ब ११ करोड बढी, कस्तो छ वित्तीय अवस्था ? (विवरणसहित)
१५ कार्तिक २०७८, सोमबार ०९:०४ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नबिल बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा १ अर्ब बढी नाफा आर्जन गरेको छ ।
सोमबार बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आवको प्रथम त्रैमासिक वित्तीय विवरणले यस्तो देखाएको हो ।
बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार चालु आवको असोज मसान्तसम्म १ अर्ब ११ करोड २२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।
बैंकको यो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने ७.३९ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको असोज मसान्तसम्म बैंकले १ अर्ब ३ करोड ५७ लाख १२ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
उक्त अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा ८५ करोड १९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको असोज मसान्तसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ४२.४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
गत वर्षको असोज मसान्तमा १ अर्ब ५७ करोड ४० लाख १५ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको बैंकले यस वर्षको सोही अवधिमा भने २ अर्ब २४ करोड १५ लाख २७ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
उक्त अवधिमा २ खर्ब २५ अर्ब ८८ करोड ४५ लाख १६ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको बैंकले २ खर्ब ७ खर्ब ४३ करोड ७२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
बैंकको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले जगेडा तथा कोषमा २० अर्ब ३९ करोड ३८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ राखेको छ ।
चालु आवको असोज मसान्तसम्म बैंकको खराज कर्जा भने वृद्धि भएको छ । गत वर्षको असोज मसान्तमा ०.४८ प्रतिशत रहेको खराज कर्जा यस वर्षको सोही अवधिमा भने १.१३ प्रतिशत पुगेको छ ।
बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी ३२.१४ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ २४७.३१ रुपैयाँ रहेको छ । अर्थतन्त्र